✆: 02-981-9198 , 064-696 4265
✉ : sale@atpinnovations.com
Filter Tank & Media
Aerator & Pump
ဘက်တီးရီးယား နှင့် အင်ဇိုင်း
ထုတ်ပိုးပြီးရေသန့်စင်မှုစနစ် (သောက်ရေသန့် + ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ)
Softener & Filtration Media
RO / UF System
DI & EDI System
Cooling Tower & Boiler
စာမျက်ာ / ATP အကြောင်း / ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် စွန့်ပစ်ရေဆိုးစနစ်၊ အကြွင်းအကျန်များအားပြန်လည်သန့်စင်ခြင်းနှင့် ရေပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့တွင် ဒီဇိုင်းအတွေ့အကြုံများ ရှိပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့ အလုပ် ရဲ့ အ‌ခြေခံစည်းမျဉ်းကတော့ ဝယ်သူတွေအတွက် ဈေးနှုန်းသင့်တင့်ပြီး လူကြီးမင်းတို့စီးပွါးရေး နှင့်ကိုက်ညီမယ့်ရေရှည်ခံစက်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းကို ရွေးချယ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေသန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းသဉ်အတွင်း ဝယ်သူများ ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်းမှအစ စက်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ပြီးစီးသည်အထိ တာ၀န်ယူပြီး ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
စီမံကိန်းမစခင်အချိန်တွင် စက်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ရန်ပြင်ဆင်ခြင်းသည် ရေပိုက်၊ လျှပ်စစ် နှင့် အခြားကန်ထရိုက်တာများ၏သက်ဆိုင်ရာတာဝန်များခွဲနိုင်ရန်တွက်အရေးကြီးပါသည်။ ရေနှင့်စွန့်ပစ်ရေဆိုးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အတွေ့အကြုံရှိပြီးကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့မှတပ်ဆင်လျှင် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းကိုဖန်တီးနိုင်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။
System နှင့် စက်ပစ္စည်းများအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
ရေသန့်နှင့် ရေဆိုးစွန့်ပစ်စနစ်များသည် အခြေအနေအမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်၍ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းများလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော အကြောင်းရင်းအများစုမှာ-
စည်းမျဉ်း သို့မဟုတ် ဥပဒေ
ပထမအဆင့် treatment လုပ်ခြင်း
System အစိတ်အပိုင်းများအားသေချာစေရန် နှင့် စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာများအပါအဝင် ၎င်း၏ ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးရန်နှင့် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ လက်သင့်ခံနိုင်သောလည်ပတ်မှုအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်သေချာစေရန်အသုံးပြုသောလုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်။ ပိုင်ရှင်ထံမှ လွှဲပြောင်းမယူမီ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအားလုံးပြီးဆုံးပြီးနောက် ကော်မရှင်အဖွဲ့သည် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဌာနမှ လွှဲပြောင်းတာဝန်ယူသည်။
သို့သော် ပစ္စည်းအားလုံးနှင့်ပိုက်များတစ်ခုချင်းစီ၏ တရားဝင်မှုကို တိုင်းတာရန်အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးအချိန်ဇယားထက်စော၍စတင်နိုင်သည်။ အချို့သောအထိခိုက်မခံနိုင်သောပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် ပိုင်ရှင်နှင့် main contractor မှသယ်ယူနိုင်သည်။ ရေသန့်စက်ရုံအသစ်များလည်ပတ်စဉ်အတွင်း ပြသနာများအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် commissioning phase သည်အရေးပါသည်။ လက်တွေ့တွင် commissioning လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ရေသန့်စက်ရုံ၏အင်ဂျင်နီယာနည်းစနစ် ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်းတိုင်းကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးရန်ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းမှသည် modules များ၊ systems နှင့် subsystems များကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သော အဆင့် ၃ ဆင့်ရှိပါသည်- ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်များသည် ရေနံဓါတုစက်ရုံများ၊ ရေသန့်စင်စက်ရုံများ၊ ဓါတ်အားပေးစက်ရုံများ၊ ဓါတ်ငွေ့နှင်ြ အခြားသောစက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးတွင်လည်း အရေးပါသည်။
ရေသန့်နှင့် ရေဆိုးစွန့်ပစ်စက်ရုံ ပရောဂျက်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်အသွေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံခြင်းဆိုင်ရာ အစီအမံများကို အာမခံပါသည်။ ပထမဆုံးအကြိမ် ရေသန့်နှင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းစီမံကိန်းများတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မျှော်မှန်းထားသောအသုံးစရိတ်နှင့် အချိန်မတိုင်မီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်၊၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါ အခန်း ကဏ္ဍများတွက် သင့်တော်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်
Raw & pretreatment
Recycle water treatment
**Please contact us for site survey with solution treatment analysis for you.
အလိုလျောက်ထိန်းချုပ်ထားသော ဓါတုပစ္စည်းများ ထည့်ခြင်း စနစ်
ကောင်းမွန်သော စနစ်သည် မျှော်လင့်ထားသော ရလဒ်ရရှိစေရန် ကူညီပေးသည်။ အကယ်၍ သင်၏ စနစ်သည် ကောင်းမွန်သော ဒီဇိုင်းမပြုလုပ်ထားလျှင် ဓါတုပစ္စည်းများငည်လည်း အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ ဓါတုပစ္စည်းများသည် ထည့်သွင်းသောစနစ်အရ လျော့နည်းခြင်း ပိုခည့်မိခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပြီး လည်ပတ်သော ကုန်ကျစရိတ်အား ပို၍များပြားစေသည်။ အားနည်းသော ဓါတုပစ္စည်း ထိန်းချုပ်ခြင်းစနစ်သည်အောက်ပါအချက်များအား ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အားနည်းသော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကြောင့် စနစ်တွင်ပါဝင်သော ပစ္စည်းကိရိယာများထိခိုက်မှု အတန္တရာယ်မြင့်မားခြင်း
ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးတသမတ်တည်းမရှိခြင်းနှင့် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်ကုန်ကျစရိတ်များခြင်း
သံချေးတက်နိုင်ချေများခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ ထိန်းသိမ်းရခြင်း နှင့် အစားထိုးရခြင်း
အစအဦးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ ဖောက်သည်များနှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲသူများသည် စီမံကိန်းများဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိ စစ်ဆေးရန်နှင့် နည်းပညာ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် စီးပွါးရေးအခြေအနေများကို အချိန်တိုအတွင်း ရင်းနှိးမြှုပ်နှံရန်ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီ တိကျမှန်ကန်မှုရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ထို့အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းမပေါ် သက်ရောက်မှုများကို ရှင်းလင်းရန်နှင့် အတည်ပြုချက်ကို မှန်ကန်စွာ အကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်သစ်များ၊ အကြံဉာဏ်များနှင့် ပံ့ပိုးမှုများပေးနေပါသည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော အစီအစဉ်ရှိစေရနှင့် လုပ်ငန်းအောင်မြင်သွာလည်ပတ်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝယ်သူများအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ရေသန့်၊ စွန့်ပစ်ရေဆိုးစနစ်အပြင် စစ်ဆေးစမ်းသပ်ခြင်းများကိုလည်း သင်ကြားပို့ချပေးနေပါသည်။
Utility Operating service
Waste water operating and service
Copyright © 2013-2022. ATP Innovations.com, All rights reserved.